Somalia oo xiriirka u jartay dalka Guinea oo ku yaalla Galbeedka Qaarada Afrika… – Hagaag.com
Somalia oo xiriirka u jartay dalka Guinea oo ku yaalla Galbeedka Qaarada Afrika…
Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo maanta shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho, ayaa ku dhawaaqay iney xiriirka u jareen dalka Guinea ee ku yaalla Galbeedka Qaaradda Afrika.
Sababta ay talaabadan u qaateen ayuu Wasiir Cawad ku sheegay in wadanka Guinea uu ku xad gubay madax banaanida iyo Qaranimada dalkan, isagoo qiray iney jiraan dalal kale oo sidan oo kale xad gudub ugu wada madax banaanida wadanka, kuwaasoo uu fariin digniin ah u diray.
“Waxaan umadda Soomaaliyeed la socodsiineynaa in Laga bilaabo saacaadaan ay dowladda Federaalka ay xiririka u jartay dalka la yiraahdo Jamhuuriyadda Guniea oo ay caasimadiisa tahay Conakry”ayuu yiri Wasiir Cawad.
Tani ayaa kusoo beegmaysa xilli dhawaan wasaaradda Arrimaha dibadda Kenya ku tilmaantay Somaliland “dal”, waxaana wasiirka arrimaha dibadda wadankan Monica Juma ay difaacday go’aankaasi.
Si kastaba, Madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi oo ay wehliyaan Wasiiradiisa Arrimaha Dibadda, Maaliyada iyo Saraakiil kale ayaa wali ku sugan caasimadda dalka Jamhuuriyadda Gini ee Conakry, iyadoo uu wada hadalo la yeeshay madaxda dalkaas.